मनोरञ्जन Archives - Page 11 of 13 - Dna Nepal
लमजुङमा तामाङ सांस्कृतिक उत्सव हुँदै १२ माघ २०७४, शुक्रबार १४:०२
शान्ता कमली बेंशीशहर, माघ १२ । सोनाम ल्होसारको अवसरमा लमजुङमा बृहत तामाङ सांस्कृतिक उत्सव हुने भएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला कार्यकारिणी समिति लमजुङले २८५४ औँसोनाम ल्होसारको अवसरमा माघ २७ गते बृहत सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गर्न लागेको हो ।..
दोश्रो नेपाल आइडलको घोषणा (कहिले हुन्छ अडिसन ?) ११ माघ २०७४, बिहीबार ०३:४४
पोखरा, माघ ११ । नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनको घोषणा भएको छ । नेपालमा नेपाल आइडलको संचालक एपि वान टिभिले फेसबुक मार्फत घोषणा गरेको हो । हुइज नेक्स्ट (को अर्को) भन्दै एपिवान टेलिभिजनको फेसबुकमा पोष्ट गरिएको छ । एपिवान टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको नेपाल..
ज्योति मगरलाई महोत्सवमा निषेध ९ माघ २०७४, मंगलवार १३:१५
पोखरा, माघ ९ । लेखनाथमा हुने महोत्सवमा गायिका ज्योति मगरलाई निषेध गरिएको छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले माघ ११ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागेको प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेलामा लोकदोहोरी गायिका ज्योती मगरलाई मनाही गरिएको हो । मेलाको..
‘दाइको विहे भो अब मेरो पालो’ २ माघ २०७४, मंगलवार ०५:४३
पोखरा, माघ २ । नेपाली लोक संगीतले हाम्रो बिभिन्न समय बोलेका हुन्छन् । माघको छेको पारेर यतिबेला बिभिन्न पञ्चेबाजाका गीतहरु बजार आएका छन् । त्यसैमध्य थ्री स्टार मिडियाले पनि एउटा आशालाग्दो गीत बजारमा ल्याएको छ । छोटो समयमा नै बिभिन्न चर्चित..
औद्योगिक ब्यापार मेला–टिकट काटेर मेला हेर्नुस्, कार चढेर घर फर्किनुस् २६ पुष २०७४, बुधबार ०३:३०
पोखरा, पुस २६ । यसपालीको औद्योगिक ब्यापार मेलामा दर्शकलाई गज्जबको स्किम छ । टिकट काटेर मेला हेर्दा आयोजकले कार उपहार दिन्छ । पोखराको नयाँबजार स्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने महोत्सवमा सबै दिन टिकट काटेर मेला हेर्न पुग्ने दर्शकमध्येबाट लक्की..
नेवारी संस्कार जोगाउन मिस नेवा २३ पुष २०७४, आईतवार १७:०३
पोखरा, २३ पुस । नेवा खल कास्कीको आयोजनामा यस वर्ष हुने सिजी मिस नेवा पोखरा ११३८ को तयारी तीव्र पारिएको छ । आयोजकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न २२ उपसमितिसमेत गठन गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिईएको हो । नेपालमा नेवार समुदायले समृद्धि, भाषा,..
मिस गोरखाका प्रतिश्पर्धीको यस्तो कला
गोरखा, पुस २३ । सौन्दर्य कला ब्यबसायी संघ, गोरखाको आयोजना तथा एस.टी. क्रियशनको ब्यबस्थापनमा गोरखामा भईरहेकोे प्रथम मिस गोरखाको सेल्फ ट्यालेन्ट राउण्ड कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगीताका उत्कृष्ट २० जना प्रतिस्पर्धीले ट्यालेन्ट राउन्डमा..
ब्युटी क्वीन नेपाल जापान हुँदै, आवेदन खुल्यो ९ पुष २०७४, आईतवार ०६:३५
टोकियो, पुस ९ । जपानको सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली महिलाहरुको समूह “म नेपाली ग्रुप जापान” ले ब्युटी क्वीन नेपाल जापान २०१८ आयोजना गर्दैछ । सुन्दरी प्रतियोगिताका लागि शुक्रबारदेखि अनलाईन आवेदन खुला भएको छ । जापानमा रहेका नेपाली..
चर्चित भारतीय फिल्म बाहुबलीका प्रभाष नेपाल आउँदै ५ पुष २०७४, बुधबार ०९:३६
काठमाण्डौं, पुस ५ । साउथ भारतिय चर्चित नायक प्रभाषको लोकप्रियता ‘बाहुबली’ पछि नेपालमा पनि उत्तिकै छ । उनको चर्चा भारत र नेपालमा मात्र होईन पुरा विश्वमा नै बढेको छ । उनको यही लोकप्रियताको कारणले नै म्याडम तुसादमा स्टैचु निर्माण भएको पहिलो साउथ..
को हुन्, मार्समेलो? जसका कारण तोडफोड भयो दरबारमार्गको क्लबमा। २८ मंसिर २०७४, बिहीबार १०:४३
२८ मंसिर, काठमाडौं । दरबारमार्गको नाइट क्लबमा भएको तोडफोडको कारक बनेका अमेरिकी डीजे मार्समेलो आफैं त्यस्ता अनौठा व्यक्ति हुन् जसको अहिलेसम्म वास्तविक परिचय खुलेको छैन । आखिर को हुन् ती ‘छुपारुस्तम’ ? दरबारमार्गको घटनाले यी अमेरिकी डीजेप्रति..